Heshiiskii shalay la saxiixay oo ay ku jiraan qodobbo xasaasi ah oo doorashada ka baxsan (Maxaa ka mid ah?) | Hadalsame Media
Home Wararka Heshiiskii shalay la saxiixay oo ay ku jiraan qodobbo xasaasi ah oo...
Heshiiskii shalay la saxiixay oo ay ku jiraan qodobbo xasaasi ah oo doorashada ka baxsan (Maxaa ka mid ah?)
(Muqdisho) 28 Maajo 2021 – War Murtiyeed ayaa laga soo saaray dhamaadka cakirnaantii siyaasadeed ee xalka loogu helay guddiyadii doorasho ee heer federaal iyo heer maamul-goboleed; xalka maaraynta guddiga doorashada Somaliland, xallinta arrimaha doorashada iyo amaanka Gedo; qoondada haweenka, jadwalka doorashada iyo dhabbe-howleedka dowlad dhisidda dalka.
Waxaa sidoo kale lagu xusay in RW Mohamed Hussein Roble uu hoggaaminayo geeddi socodka magacaabista Guddiga Doorashada DF (FEIT) iyo Guddiga Maamul-goboleedyada (SEIT).
Madaxdu waxay ku heshiiyeen in geeddi socodka doorashada madaxwaynaha iyo xildhibaannada lagu soo afjaro muddo 60 maalmood ah. Deeto, Guddiga Doorashadu wuxuu soo saari doonaa jadwal ay heshiis ku yihiin DF iyo Maamul-goboleedyada ee hirgelinaya doorashada. Golaha Wadatashiga ayaa wakil ka ah geeddi socodka doorashada isaga ayaana xallinaya arrin kasta oo soo baxda.
War Murtiyeedku wuxuu sidoo kale wuxuu waqti go’an oo 2 sanadood ah u qabtay dhamaystirka arrimo waawayn sida dhamaystirka dastuurka qabyada ah, wadaagista khayraadka, qeexidda awoodaha hay’aadka Federaalka, dib u qaabaynta ciidamada amaanka, in heshiis laga gaaro moodalka wadahadalka Somaliland, asaas dhigitaanka xaalado keeni kara in la qabto doorasho qof iyo cod ah.
Dhismaha tanaasul guulaystey
“Natiijadani waa mid guul u wada dadka Soomaaliyeed. Dadku nabad bay doonayeen, waxay doonayeen doorasho waana diyaar. Waxaan runtii idiinkaga mahad celinayaa dedaallada aad dhamaantiin bixiseen,” Ayuu yiri MW Mohamed Abdullahi Mohamed ‘Farmaajo’, oo sheegay in heshiiska lagu gaarey wada hadallo tanaasul ku salaysnaa.
RW Mohamed Hussein Roble ayaa isna yiri: “dowladda waxaa ka go’an hirgelinta heshiiskan. Heshiiskani wuxuu noo horseedi doonaa doorasho loo dhan yahay oo xor iyo xalaal ah taasoo xuquuqaha oo idil la eegi doono lana ixtiraami doono.”
Previous articleGudd. Cabdi Xaashi oo ugu dambayn aqbalay inuu ka qaybgalo munaasabadda xiritaanka Shirka Teendhada
Next articleDalal waawayn oo soo dhoweeyey heshiiskii doorashada ee shalay Muqdisho lagu saxiixay